Mayelana NATHI - Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd.
IShanghai West Bridge Inc. Co., Ltd.
Ukuphishekela ikhwalithi ephelele nokwakha uphawu lomhlaba jikelele
Vuselela izingxenye zezimoto eyodwa bese ukhonza ibhande elilodwa, umgwaqo owodwa
Ukuhlanganiswa kwamaketanga embonini yamaloli
Ukwakha isisekelo sezimboni ezisezingeni lomhlaba
Abantu abathambekele, abanesibindi, abazuzayo futhi baphumelele
Qeda ukuchitha bese ulwela ukwenza kahle
Ukubukwa Kwethalente Lebhizinisi:
Unakho kokubili amandla nobuqotho bezepolitiki
IShanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka ka-2011. Cishe iminyaka eyi-10 yesipiliyoni ekukhiqizeni isibuko seloli. Ukusuka entuthukweni, ukukhiqizwa kuya ekuthengiseni, ukuhlinzeka amakhasimende nge-one-stop service, kuneqembu elihle kakhulu lokusiza amakhasimende entuthukweni nasekukhiqizeni.
Imikhiqizo yethu ihlanganisa izwe lonke ngenethiwekhi yethu enkulu yokuthengisa futhi yanelise amakhasimende ethu ngokuhle ngemuva kokuthengiswa kwensizakalo.Siyathuthukisa futhi sengeza imikhiqizo emisha njalo ngonyaka wesigamu. Imikhiqizo yethu ithunyelwa kakhulu e-USA, Canada, Mexico, South America, Russia naseEurope imikhiqizo.Izinto zethu zithunyelwa emazweni angaphandle futhi zijabulela imakethe ethembisayo yekhwalithi ephezulu, intengo yokuncintisana kanye nensizakalo enhle. ezangempela ezinezitifiketi ze-OEM, ziqinisekisa ikhwalithi futhi ngemuva kwensizakalo yokuthengisa. Kuzoba intokozo yethu ukucaphuna kuwe intengo enhle kakhulu futhi sikunikeze insiza enhle kakhulu.
Izimiso zenkampani yethu ukwethembeka, ukukhuthala, ukucubungula izinto, ukubonga nokuzidela.Sihlose ukuhlinzeka amakhasimende avela emhlabeni wonke ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nentengo yokuncintisana kakhulu. Ukuze sifeze le nhloso, sisungule ukulawulwa kwekhwalithi eqinile, ukuhlolwa, ukuphathwa okuhle kanye nohlelo lokuphakelwa okuhle. ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo yethu, wonke amafektri sihlanganyela futhi sisebenzisana ngokukhiqiza izingxenye zezimoto ngokuqinile ku-ISO9001 / QS9000, TS16949 isitifiketi sekhwalithi.
Inkampani yethu ihlale inamathela kwifilosofi yefilosofi "esezingeni eliphakeme, ehambisana nokukholwa okuhle, sebenzisa umoya wokuqamba ukuthola ukunakwa nokubambisana okuvela kubangani bethu. Imikhiqizo yethu inamabanga aphelele, intengo ebabazekayo, ikhwalithi ephezulu, futhi iphakamisa izinga eliphakeme idumela emakethe.Sigxila entengo efanelekile nasekulethweni ngesikhathi.
I-Ningizimu Melika 25.00%
I-Nyakatfo Melika 20.00%
I-Mid East 20.00%
Namuhla amaklayenti ethu avela emazweni angaphezu kwama-30 athembela kwimikhiqizo ye-SWB, e-Afrika, e-Asia, eNingizimu Melika, eYurophu, eNyakatho Melika naseMpumalanga Ephakathi njll.
Sikholelwa ukuthi abasebenzi akuzona nje kuphela izimpahla ezibaluleke kakhulu zenkampani, kodwa futhi bayitshe legumbi eliyinhloko lenkampani. IShanghai West Bridge Inc. Co, Ltd ikubheka kakhulu ukudala umsebenzi othokozisayo wabasebenzi nokubanikeza indawo ebanzi yentuthuko endaweni yokusebenza enamandla, yesayensi, enothando futhi evulekile.Siqinisekisa ukuthi abasebenzi bathola ulwazi olwanele nenkululeko ephelele ukusebenza ukuze amandla abo afezeke ngokugcwele. Ukuxhumana nokuqeqeshwa yizici eziyisisekelo zesiko lethu lokuphatha. Ngokwenza njalo, sikholelwa ukuthi abantu bangakwazi futhi bazokwenza izinqumo ezifanele futhi benze umsebenzi omuhle.Sizama ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzi bethu ngezingxoxo ezihleliwe kanye nempendulo ngokusebenza komuntu ngamunye ngenkathi sihlangabezana nezidingo zebhizinisi ezizayo. Sinikezela ngamathuba entuthuko kubasebenzi bethu futhi silindele ukuthi bathathe umthwalo wentuthuko yabo. Ukuqeqeshwa okufanele nokuthuthuka kubalulekile empumelelweni yesikhathi eside yenkampani nabasebenzi bayo.Sizama ukuhlinzeka ngamathuba emisebenzi ehlukahlukene ahambisana nezidingo zomuntu ngamunye, futhi sikholelwa ekwakheni ukulingana phakathi komsebenzi nempilo yomuntu siqu. Izinkampani ziyaqonda ukuthi izimo zokusebenza ezilindelekile ziyahlukahluka ngezigaba zempilo yazo kanye nemibono yazo.
Sikhuthaza abasebenzi bethu ukuthi basebenze ngokuzikhandla, babe nobuciko, futhi baphonsele inselelo ngendlela esisebenza ngayo, ngoba ilukuluku nokuba nesibindi kungakhuthaza abantu ukuthi bathole izindlela ezintsha zokusebenza.
IShanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. ihlala ifuna ukukhula okuvamile kwenhlangano kanye nabasebenzi bayo, ibanikeze indawo yokusebenza enhle, inala yamathuba okuthuthukisa amakhono, ukuqeqeshwa okunothile kanye namathuba okushintshana aphesheya.
Ngokuhlolwa kokuthunyelwe nokusungulwa kwezinkomba zokusebenza kwesisebenzi ngasinye, iShanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. inika abasebenzi imithwalo yemfanelo ecacile nezidingo ezicacile, ikhuthaza abasebenzi ukuthi banqobe izithiyo ngobuchwepheshe, baqedele ukuthunywa kwabo, babe nethemba futhi babe nethemba , ngibe nesibindi sokuzibophezela, futhi ngifeze ukuthuthuka kwamakhondo ngokufunda okuqhubekayo nokwenza.
IShanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. ikhuthaza ukubambisana phakathi kweminyango nabasebenzi ngokuya ngemishini ebumbene nokwethembana okugcwele, kwakha izinzuzo zenkampani ngezinzuzo zethimba, kukhuthaza ukwabiwa kolwazi phakathi kwabasebenzi, kusungula ubudlelwano obuhle bokusebenza, futhi kuqaphela iminikelo yabanye abantu emsebenzini.